Alkemy X ကိုအမည်များ Clare O 'Brien အရောင်းအဖွဲ့ကို Join မှ - အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Alkemy X ကိုအမည်များ Clare O 'Brien အရောင်းအဖွဲ့ကို Join ဖို့
Alkemy X ကိုအမည်များ Clare O 'Brien အရောင်းအဖွဲ့ကို Join ဖို့
NEW YORK CITY- Alkemy X ကို, BRAND နှင့် Episode အကြောင်းအရာအတွက်အထူးပြုတစ်ဦးအပြည့်အဝ-ပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို, Clare O 'Brien စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒုတိယသမ္မတအဖြစ်ကုမ္ပဏီ၏ပူးပေါင်းထားပြီးကြေငြာလိုက်သည်။ O 'Brien တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်နိုင်ငံတကာတွင်မြင့်မားသက်ရောက်မှုအကြောင်းအရာရှာကြံတူသောစိတ်ကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ဆက်ဆံရေးနိုင်ဖို့အထောက်အကူမှ Alkemy ထံသို့မရောက်ရ။ Alkemy X ရဲ့နယူးယောက်စတူဒီယိုထဲကအခြေခံထားလိမ့်မည်သူကို O 'Brien, အရောင်းနက်ရှိုင်းသောအတွေ့အကြုံ, ဖန်တီးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအခန်းကဏ္ဍနှင့်အေဂျင်စီများ, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မီဒီယာကုမ္ပဏီများနှင့်ခိုင်မာသော, ကြာရှည် client ကိုဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်စိတ်အားထက်သန်တတ်၏။
"Clare Alkemy X ကိုထောက်ပံ့ပေးသမျှသောဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အကြီးအ pedigree နှင့်အတွေ့အကြုံရှိပြီး: တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအရေးယူမှု, ဒီဇိုင်း, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု, အယ်ဒီတာအဖွဲ့နဲ့ post" Alkemy X ကို CEO ဖြစ်သူကို Justin Wineburgh ကဆိုသည်။ "သူတစ်ကြီးမားတဲ့စွမ်းအင်နှင့်စိတ်အားထက်သန်တတ်၏ကျနော်တို့သူမကဤနေရာတွင်လှသောအောင်မြင်သောဖြစ်လိမ့်မည်ကိုငါသိ၏။ ငါတို့သည်အချို့သောအချိန်များအတွက်သူမ၏ပေါ်မှာငါတို့မျက်စိဖူးသူတစ်ဦးမြင့်တက်ကြယ်ပွင့်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမသံသယရှိပါတယ်။ "
Clare O 'Brien
Alkemy ပူးပေါင်းမီ, Clare O 'Brien ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီခေါင်းတိုင်နှင့်အတူအရောင်းဌာနမှူးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ကြောင်းမတိုင်မီကသူမကနှိမ့်ချတီဗီမှာရောင်းအားအခန်းကဏ္ဍကျင်းပနှင့်စာတိုက် TV နဲ့ Sonic ပြည်ထောင်စုမှာရောင်းအားအားထုတ်မှုဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူမ၏နောက်ခံ QuietMan မှာတိုက်ရိုက်အရေးယူနဲ့ post ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်အလုပ်ပါဝင်သည်။ တစ်ဇာတိ Los Angeles မြို့, O 'Brien Bard College မှဘွဲ့ရများနှင့်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုက်စားနယူးယောက်စီးတီးသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ တစ်နည်းနည်းနဲ့စွန့်ခွာအတွက် ဟောလိဝုဒ်, O 'Brien ဖျော်ဖြေရေးကမ္ဘာကြီး join ဖို့မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။
Alkemy X ကိုမှသူမ၏ပြောင်းရွှေ့ဆွေးနွေးခြင်း, Clare O 'Brien အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှု၏အားလုံးရှုထောငျ့မှာရှိတဲ့နယ်နိမိတ်တွန်းအားပေးရန်ကြည့်သူကဲ့သို့ကုမ္ပဏီဖော်ပြသည်။ "ကျွန်မအခွက်တဆယ်နှင့်အရင်းအမြစ်များများ၏မတူကွဲပြားခြင်းဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်" ဟုသူမကဆိုသည်။ "ငါသည် High-end မူရင်းအကြောင်းအရာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါဖန်တီးမှုအသင်းများနှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖို့ Alkemy X ရဲ့စွမ်းရည်အားဖြင့်အထူးစိတ်ဝင်တစားလေ့လာခဲ့သည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပေါ်နေသောသောနည်းလမ်းများလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနားလည်ပါသည်။ တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တိုက်ရိုက်အရေးယူအပါအဝင် delivery- မှတဆင့်အယူအဆကနေစီမံကိန်းများကိုယူနိုင်ခဲ့အဖွဲ့ဒီဇိုင်း, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုနှင့် Alkemy X ကိုရုပ်ရှင်မှော်များတွင်ရလဒ်များသောသိပ္ပံနှင့်အနုပညာ synthesize ဖို့ထူးခြားသောစွမ်းရည်ကို Post-ပေးသည်။ "ထားရှိခြင်း
သူမ၏အခန်းကဏ္ဍသစ်အတွက်, O 'Brien ဖန်တီးမှုအဖွဲ့များချိတ်ဆက်ဖို့နဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်သမာဓိရှိ grounded ဖြေရှင်းနည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မျှော်လင့်ပါသည်။ "ငါသည်ဆက်ဆံရေးအပေါ်လုံးဝအလေးပေးတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတည်ဆောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါကကျွန်မအကြောင်းကို-လူတွေအသည်းအသန်ပေါ့ယျ။ သူတို့ရဲ့အလုပျ၏အလားအလာနှင့် ပတ်သက်. စပ်စုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေသောပြည်သူ့။ ဘဝမှာတော့ကအားလုံးကိုအချိန်နှင့်ဆက်ဆံရေးဆင်းလာပါတယ်။ "ဟုသူမကမှတ်ချက်ချ။ "Alkemy X ကိုကရရှိသွားတဲ့။ သူတို့ကတစ်ဦးပြောင်းလဲနေသောကုမ္ပဏီပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုတွန်းဖို့ရှာဖွေနေလူများကိုတက်လုပ်ကွပါ၏ ပြဿနာများကို excel နဲ့ဖြေရှင်းမှမောင်းနှင်ကြသူလူပေါင်း။ "
Alkemy X ကိုအမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်, ကွန်ယက်ဖန်တီးမှု, ဘက်ပေါင်းစုံစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ဒစ်ဂျစ်တယ် / လူမှုရေးအစပျိုး long-form ကို unscripted ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, Episode TV နဲ့ကြော်ငြာများအတွက်အမြင်သက်ရောက်မှု။ မူရင်းယူနစ်မကြာသေးမီက unscripted အထူးထုတ်လုပ် အဆိုပါမင်းလမ်းငါ့ကို Down ဆွဲပါ TLC အဘို့။ Advertising ကြော်ငြာနှင့် branded အကြောင်းအရာ clients များ BMW ကား, Pepsi, Panera, Lexus, Google နဲ့ Samsung တို့ပါဝင်သည်။ အထူးနှုန်းများ, ဘက်ပေါင်းစုံနှင့်လူမှုရေး clients များ Nickelodeon, Syfy, AMC, TruTV နှင့်စားနပ်ရိက္ခာကွန်ယက်များပါဝင်သည်။ အဆိုပါ VFX အဖွဲ့ AMC ရဲ့အပါအဝင်စီးရီးအပေါ်အလုပ်လုပ်တယ် အဆိုပါ Walking Dead ကိုကွောကျရှံ့ အား NBC'' s ကို Blindspot, HBO ရဲ့ အဆိုပါစားကြွင်းစားကျန်, Netflix နဲ့'' s ကိုအရူး နှင့် Amazon ရဲ့ အဆိုပါအံ့ဖွယ်မစ္စစ် Maisel.
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပြောင်းရွှေ့အပေါ်လူတွေ လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ်	2019-06-10
ယခင်: "အမှောင်ဖီးနစ်" တစ် Mutant စိတ်သို့မြင့်တက် Sun ကရုပ်ပုံများ Journey
နောက်တစ်ခု: ကံကောင်းဖင်လန် Productions ပါဝါအထောက်မှ Indipro Tools များအသုံးပြုမည်